कोरोनाबाट विश्वभरि १८हजार ९०७को मृत्यु, ४लाखभन्दा बढी संक्रमित |
कोरोनाबाट विश्वभरि १८हजार ९०७को मृत्यु, ४लाखभन्दा बढी संक्रमित
Wednesday, March 25, 2020 । जेनेभा, स्वीट्जरल्यान्ड
विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मंगलबारसम्म १८ हजार ९०७ जनाको मृत्यु भएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेकोे विवरणअनुसार संसारभरि ४ लाख २२ हजार ८२९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन् । संक्रमित व्यक्तिहरुमा १ लाख ९ हजार १०२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । २ लाख ६२ हजार ७७४ व्यक्ति हाल संक्रमित रहेका छन् । कोरोना भाइरस कोभिड१९ का संक्रमण हालसम्म १९२ भन्दा बढी देशमा देखा परिसकेका छन् ।
चीनको हुबेई प्रान्तको उहान शहरबाट शुरु भएको कोभिड-१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’को संज्ञा दिएको छ । सोही बमोजिम सतर्कता अपनाउन पनि संगठनले विश्वका नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट चीनमा ३ हजार २८१ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन्, भने, ८१ हजार २१८ जना संक्रमित रहेका छन् । चीनमा ७३ हजार ६५० व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् । हाल कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्त प्रभावित भएको इटालीमा यस रोगको संक्रमणको कारण ६ हजार ८२० व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । हाल ६९ हजार ७६ जना संक्रमित रहेका छन् बुधबारसम्म ८ हजार ३२६ व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
इरानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण १ हजार ९३४ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । हाल २४ हजार ८११ जना संक्रमित रहेका छन् । ८ हजार ३७६ व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका बताइएको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण स्पेनमा २ हजार ९९१ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । हाल ४२ हजार ५८ जना संक्रमित रहेका छन् । स्पेनमा ३ हजार ७९४ व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
जर्मनीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण १५९ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । हाल ३२ हजार ९९१ जना संक्रमित रहेका छन् ,भने ३ हजार ९० जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण कारण ७८२ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । हाल ५४ हजार ८६७ जना संक्रमित छन् , भने ३७८ उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
फ्रान्समा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण १ हजार १०० जनाको मृत्यु भएका छन् । हालसम्म फ्रान्समा २२ हजार ३०४ संक्रमित रहेका छन्, भने ३ हजार २८१ उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यस्तै दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण १२६ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । ९ हजार १३७ संक्रमित भएका छन् ,भने ३ हजार ७३० जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
स्विट्जरल्याण्डमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण १२२ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । ९ हजार ८७७ संक्रमित भएका छन् । १३१ जनाको भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् । त्यस्तै बेलायतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ४२२ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । ८ हजार ७७ संक्रमित भएका छन् । त्यसैगरी १३५ जनाको भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
नेडरल्याण्डमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण २७६ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । ५ हजार ५६० संक्रमित भएका छन्,भने २ जनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रियामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण २८ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । अष्ट्रेलियामा ५ हजार २८३ संक्रमित भएका छन् , भने ९ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
बेल्जियममा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण १२२ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । यहाँ ४ हजार २५९ संक्रमित भएका छन् । बेल्जियमले ४६१ जनाको भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । त्यस्तै नर्वेमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण १२ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् । २ हजार ८६६ संक्रमित भएका छन्, भने ६ जनाको पचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अष्ट्रेलियामा ८, ब्राजिलमा ४६, स्वेडेनमा ४०, पोर्चुगलमा ३३, क्यानाडामा २६ , डेनमार्कमा २३, मलेसियामा १६, आयरल्याण्डमा ७, पोल्याण्डमा १०, ग्रीसमा २०, इन्डोनेसियामा ५५ र फिलिपिन्समा ३५, हङकङमा ४, इराकमा २७ अल्जेरियमा १९ , भारतमा ११, पाकिस्तानमा ६, थाईल्याण्डमा ४, सिंगापुर २, रुसमा १, पेरुमा ७, मेक्सिकोमा ४, इजिप्टमा २०, पानामा ६ अर्जेन्टिनामा ६, लेवनान ४, संयुक्त अरव इमिरेट्समा २, ताइवानमा २, सानमरिनोमा २१ हंगेरीमा ९, मोरोक्कोमा ५, अफगानिस्तानमा १, नाइजेरियामा १ , बंगलादेशमा ४, घानामा २, सुडानमा १ व्यक्तिको मृत्यु भएका छन् ।
सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णयको, प्रतिपक्षीद्वारा स्वागत
जापानद्वारा आपतकाल घोषणा, आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था
प्रधानमन्त्रीलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छैन : मन्त्री गभ
साउदीको झन्डै एक दर्जन शहरमा कर्फ्यु लम्बियो
१. आइतबारदेखि भरी सिलिण्डर ग्यास पाउने
२. सडक लेनमा रङ्ग लगाउँदै कामदार
३. सेनाको रगतले सुत्केरीको ज्यान बच्यो
४. ‘लकडाउन’ को समयमा पनि अत्यावश्यक काम गर्न चाहन्छन् निर्माण व्यवसायी
५. चीनको उहानमा लकडाउन समाप्त, सडकमा मानिसको भीड
६. मापदण्डअनुसार राहत दिन र तस्बिर नलिन नेकपाको निर्देशन